Rakibolana malagasy sy Rakipahalalana momba an' i Madagasikara : /bins/ohabolana/anatra.mg.n
Mpiasabe vonton' anatra ka manao mbay lalana an-tsena. [Veyrières 1913 #6514, Cousins 1885 #1980, Houlder 1895, Rinara 1974, Rajemisa 1985]
Ny anatry ny ray toy ny tsipak’ ombilahy : mahavoa, mahafaty ; tsy mahavoa, mahafanina. [Cousins 1885 #2158]
Ohabolana Ny anatra, vahiny : tiana, mody mandry ; tsy tiana, mitampody. [Houlder 1895 #1588, Veyrières 1913 #6521, Cousins 1885 #2157]
Ohabolana Ny an-drano reny no mifananatra, ka ny kamboty no hendry aloha. [Cousins 1885, Veyrières 1913]
Ny an-drano reny no mifananatra, ka ny kamboty no mahazo anatra. [Cousins 1885]